Taakhiida Sanaag iyo xukunkeeda
Xukunka Saladanada Sanaag kuma koobna ee intan oo keliya ee in tani waa in aan ku soo sameeyey naqtiin kuna tusaayey taariikhda boqorada Sanaag.
marka sidaa u la socda in aanay taariikhadu in tan ahay ee ay intani hor dha u tahay.
Sanaag wuxuu ku yaal waqooyiga soomaliya wuxuu caan ku yahay Maydiga, fooxa, Madagta, sidaa aragtaba waxay dhirtani ka baxaan Buuraha. waxaan ku taal Buurta buuran somalia ugu wayan uguna quxoon oo ah buurta la yiraahdo Calmadow kadaawo halakan sawirada calmadow waxaa degan Sanaag Somali qola walba waxaase gaar u leh oo degan beesha Warsangeli. waxaan lagu xukumaa xukun Saladanadeed wuxuuna ka mid yahay Sanaag Gobolada ugu qadimisan ayan ka tidin xukunka Sulidaanimada in beel walbi yeelato nin u ah madax wayne oo kale una gooya talada una ah aftahan ahnin nin laga danbeeyo. waan xukunka lei ka taliya Sanaag sanaag hada waxaa u ah Suladaan. Suladan saciis Suladaan Cabdi salaan Suladan Maxamood Suladan Cali shire ......
ilaa meeshay ka timid sida bay u soo socotay Saldandu.
Saciid Cabadi salaan oo hadalaya
Weli waxa Somaliya Beel beel u xukuma suaaldaan,garaad, caaqil, Islaam iyo wixii lamid ah. waxaan tusale inyar idinka siiyan intan aqaan. raga madaxda ua ha beelaha ya ka dhasheen.
1. Suldaan Saciid Suldaan C/Salaan Suldaan Maxamuud
2. Garaad C/Qani Garaad jaamac
3. Beeldaaje Yaasiin Cali Xasan
4. Beeldaaje Cali Beeldaaje Faarax
5. Beeldaaje Axmed Xirsi Max’ed
6. Suldaan C/Qani Yaasiin Cali
7. Suldaan C/Laahi Cartan Faarax
8. Suldaan C/Laahi Nuur Faarax
9. Garaad C/Laahi Cali Ciid
10. Suldaan Axmed Maxamed Hure
11. Suldaan Saciid Ismaciil
12. Suldaan Xasan Cali Jibril
13. Ugaas Ibraahim Cali Shibiin
14. Suldaan Max’ed Cali Max’ed
15. Salaad Cali Faarax
16. Beeldaaje Cali Nuur Faarax
17. Ugaas Bashiir Cabdi Ciise
18. Garaad Axmed Baxwal
19. KS/Beeldaaje Ismaciil Beeldaaje Cabdulaahi
20. Garaad C/Laahi Max’ud Max’ed
21. Suldaan Cabdi Buurte
22. Suldaan Ciise Xasan Cumar
23. Ugaas Cumar Max’ed Axmed
dadkani waa dadka u ah madaxada beelagooda ma qabiiladooda.
Suladaanka Sanaag taariikhda aad ka ah u yeelay wa Suladaan Maxamoud Cali shire oo ahaa nin Aftahan ah noolaan xiligii Daraawiishtu dunida hantiday Ingiriiska iyo Talyaanigana ay qaby haysteen. Somaliya markaa waxa ak abixi jiray sadex dab kan Maxamed Cabudle xasan iyo daraawiishtiisa oo degaan Taleex kan boqor cismaan oo deganaa Nugaal iyo kan Maxamoud Cali shire oo xukumayey markaa Sanaag.Sayadikuna rabay in uu Sanaag hantiyo. Balse dagaal layiri ku hanti Sayidka uuna geli waayey. Sayidka iyo Maxamoud Cali Waxay isku ahayeen isku seedi bay ahaayeen oo Sayidkaa qabay Ina cali shiro oo Maxamoud walashiis ah. Sayidku Markuu Guursanyay Maxamoud Walaashi baa xoola loo sii raya markaa Sayidkaa markuu baxay ee xoolihii qatay u soo dhiibay maxamoud Xabad tan qoriga loo isticmaalo macanheedun ayahay adiga iyo aniga waxaa inoo dhexeeya Dagaal Dagalkaasi wuxuu socday mudo dheer wuxuu Saydku soo gurguurtaba marki danbe wuxuu galay Calmadow wuxuun auga sii gudbay Magalada Laasqoray oo uu ka xoog batay Ciidankii Maxamoud Cali shire waxaa halakaa Doon ka goostay oojoogau markii Ciidanka Sayidku soo galeen magalada Cali maax Cali maxaa baa doon ka goostay una gudbay wadanka yaman Akhbaarkiina u gudbiyey Ciidankii ingiriiska ee Xukumayey Cadan markaas Waa mark ay daraawiish baabday. Oo Diyaaradaha lagu soo weeraray Markaas baa waxaa Ingiriiskii ku soo kiciyey Dhowr iyo labatan diyaaradoo iyadoo aan Hore meel ka mid ah Africa loo islicmaalin Diyaarado baa Ingiriiskii ku soo kiciyey. waa marku lahaa Sayidku "Coomadayaal Duulaay cadanka keenen " Daraawiish waxay laasqoray haysatay ilaa iyo 15 maal mood oo ay saareen bandoo laayeen wixii dad joogay inkasta oo aany wada qabsan magalada dhan ee ay qabsadeen qabta. qaybta layiraahdo shaaca oo ahayd halkii Maxamoud cali shire rugta uahay aanay qabsan oo ciidanku xukumayeen. lakiin inta ay Sayidka iyo ciidankisi qabsadeen waa baabiyen dad iyo duunyaba. markii Saydikii baxay oo lagu weeray diyaradan waxaa ka daba tegay Maxamoud iyo Ciidankiisii waxayan is ka heleen Meesha lagu MAgacaabo Jiidale oo hada ha Tuulo Ceelka layiraahdo Dur dur dushiisa halakaas oo ingiir iyo saydika iyo ina calishireba ku ku kulmeen. waxayan hayd meeshii ugu dagalak xumayd intii dagalka dhacday Sanaag waxayan ahayd meeshii daraawiish ku jabtay. uu kabacdina Saydi kii u caray Koonfur Akhirkiina ku dhintay.
Dagaalkaa kadiba Maxamoud iyo Ingiriisku waxay yesheen cilaaqaad marka danbe wuxuu ingiriisku bilabay in uu xukunka ku adkeeyo Maxamoudna ma jecalayan in amar kiisa mahaa mid kal fula. sidaa dartee waxaa colaadi laka dhex martay Maxamoud cali shire iyo Ingiriiskii waxaan ingiriiskii is yirahdeen nin kan yaanu dagal idinku kinacin waxayan u masaafuriyeen Jasiirad fog oo ku taal bada dhexdee halkaas oo uu ku soo qatay in ka badan 20 sano akhiri taankii wuxuu ku soo labtay Gobolkisii wuxuuna ku geeriyooday Tuulada Xubeera oo inyar ka durugsan magalada Badhan. alla ha u naxariisto isaga iyo intii dhumatay ee muslin ah ba.
Taarikhdu waa silsilad ana suubiyaan ahay . taasaa
ku dhifo halakan sawirka taleex